Colombia nokapohin'ny horohoron-tany 6.0
Home » Toerana fitsangatsanganana » Colombia nokapohin'ny horohoron-tany 6.0
Horohoron-tany nahatratra 6.0 no namely Kolombia androany 24 Desambra 2019, amin'ny 19:03:52 UTC trano mihozongozona ao an-drenivohitra, Bogota. Izany dia mahatonga ny horohoron-tany 2 any Amerika atsimo amin'ny andro iray, toy ny horohoron-tany mitovy habe aminy ihany koa namely an'i Arzantina ora vitsivitsy talohan'izay.
Ny fanadihadian'ny jeografia amerikana dia nilaza fa ny horohoron-tany dia manodidina ny 100 kilometatra atsimon'ny Bogota akaikin'ny tanànan'i Lejanias. Nisy horohoron-tany 5.8 norefesina, 16 minitra taty aoriana.
Rehefa nifarana ny horohoron-tany tamin'ny horohoron-tany 6.0 voalohany dia naneno tao amin'ny tanànan'i Bogota ny kiririoka.
Tsy nisy ny tatitra momba ny fahasimbana na ratra.
Ny horohoron-tany dia naharitra 10 kilometatra ny halaviran'ireo toerana ireo:
33.4 km (20.7 mi) W of Granada
61.3 km (38.0 mi) SSW of Acacias
83.3 km (51.6 mi) SSW of Villavicencio
Ny birao fizahan-tany any Seychelles dia mitondra ny paradisa an-nosy mankany amin'ny foibe fivarotana varotra any Torkia
Horohoron-tany mahery no namaky an'i Santiago del Estero, Arzantina